🥇 ▷ Samsung ayaa soo saartay Galaxy S6 tab oo wata muuqaal hordhac ah ✅
Samsung ayaa soo saartay Galaxy S6 tab oo wata muuqaal hordhac ah
DIIWAANGALIN Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy Tab S6 muuqaal gaaban oo hordhac ah oo ay la socoto farshaxan Coco Capitan. Muuqaalkan fiidiyowgu wuxuu iftiiminayaa kambuyuutarka dambe ee ‘tab S6 dual labada gadaal’ (oo leh muraayad xagal ballaadhan) oo taageersan DeX multitasking oo leh alwaax la socon kara, iyo sidoo kale xaqiiqda inay la jaan qaadi karto S Pen, oo ah kan ugu horreeya ee kiniiniyada Samsung.
(embed) https://www.youtube.com/watch?v=yilbQbIm7UU (/ embed) Fiidiyeyaasha Galaxy Tab S6: Hordhac Rasmi ah (oo leh Coco Captain)
Hadda wixii macluumaad ah. Shaashadda S6 waxay yeelan doontaa shaashad 10.5 inji ah Super AMOLED oo miisaankeedu yahay 420 g. Waxay lahaan doontaa laba kamaradood gadaal ah (13 megapixel + 5 megapixel) oo leh lens xagal aad u ballaaran iyo selfie camera 8 megapixel camera. Nalalka iftiinka waa 7.40mAh batari. Ka dib waxaa jira ‘S Pen’, kaas oo Coco uu sharraxaad dheeraad ah ka bixiyo fiidiyowga; Waxay ku taal dhabarka aaladda meel bannaan oo yar.
Dhinaca hore ee guriga, Tab S6 wuxuu adeegsan doonaa aalad 7nm octa-core processor (Snapdragon 855), oo lagu taageerayo 6GB oo RAM ah iyo 128GB oo kayd ah ama 8GB oo RAM ah iyo 256GB oo kayd ah. Waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa kaarka MicroSD ilaa 1TB halkaas.
Qalabka S6 wuxuu bilaabi doonaa suuqyo la xushay “dabayaaqadii Ogosto,” sida uu sheegayo Samsung, waxaana laga heli doonaa seddex midab: Mountain Grey, Cloud Blue, iyo Rose Blush.
Maqaalka asalka ah wuxuu kusocdaa hoosta.
Samsung ayaa soo saartay Galaxy Tab 6 maanta 3 pm BST. Waxaa laga yaabaa inaysan runtii ahayn war naxdin leh, oo aad sax tahay, laakiin xaqiiqda ah awgeed waxaan usbuuc kaliya uga harsan nahay munaasabada Samsung Unpacked ee ka dhacda magaalada New York.
AKHRISO Tixraac: Wax kasta oo aan ka ognahay Samsung Galaxy Note 10
Sida dadka kale oo dhami, waxaan rajeyneynaa inaan aragno labadaba Galaxy Tab S6 iyo kan soo socda ee Galaxy Watch Active Release 2 oo ku sugan Brooklyn 7da Ogosto iyadoo leh calankii ugu dambeeyay ee Samsung, La Galaxy Note 10. Si kastaba ha noqotee, Samsung ayaa 20 xayeysiiya labaad oo xayeysiis ah ka dib, waxaana naloo cadeeyay khalad.
(embed) https://www.youtube.com/watch?v=2J_wfMIG7Co (/ embed) Video La Nuevo Galaxy Eyelashes iyo Saacadaha
Fiidiyowga – kaas oo muujinaya labadaba Galaxy S6 tab iyo saacadaha firfircoon ee 2 – badanaa waa jahwareer, in kasta oo ay wax xoogaa iftiimin ah ka bixiso astaamaha S6 S6 ee ilaa hadda la soo sheegay. S Pen wuxuu sameyaa dhowr ciyaarood: Hal mar, waxaan aragnaa inuu ku yaal dhinaca dambe ee Tab S6, isagoo ku sii daraya wararka xanta ah ee ah in kiniiniga cusubi uu kubad ku ciyaari doono dhinaca bidix (kaameeraha hoostiisa) meesha uu ku fadhiyo. heli doona S Pen.
Jidka: Waxaan iftiiminaa laba nooc oo kamarado gadaal ah, oo si toos ah uga fidsan geeska bidix ee sare ee kaniiniga. Haddii daadku la isku halleyn karo, Tab S6 wuxuu lahaan doonaa laba kamaradood oo gadaal ah, oo leh cabbir cabirkoodu sarreeyo, xallin iyo howlo aan la garaneyn.
Haddaysan ahayn sidaas, ma jiro tiro badan oo la soo sheego. Xakamaynta mugga, batoonka korantada, iyo garka kaarka SIM waa meel walba, laakiin waxaan aad u yar yar u aragnaa shaashadda Super AMOLED 10.5in. Samsung waxay sheeganeysaa in kiniiniyada “ay dhiirigelinayaan hal-abuurka ayna kordhiyaan wax soo saarkaaga,” waxaan qiyaasi karnaa kaliya waxa ay ka dhigan tahay
Nasiib wanaag, muddo dheer ma aanan sugin in aan buuxinno booska; S6 tab ayaa la bilaabay maanta oo taariikhdu tahay 31-ka july ee 3 galabnimo BST (10:00 am ET, 7:00 pm PT). Wax kale oo aan ahayn Galaxy Active Clock 2 ayaa la sii dayn doonaa Ogast 5; Waxaan ka heli doonnaa macluumaad dheeri ah oo tan ku saabsan maqaal gaar ah mar alla markii saacadda smart la furo.
Waxaan cusbooneysiin doonaa boggan isla marka aan waxbadan ka ogaano Samsung Galaxy S6 tab, markaa soo laabo goor dhow.